Magacyada SHAN Weeraryahanka Oo Barcelona U Kala Dooranayso Beddelka Luis Suarez – Latest Sports News
Magacyada SHAN Weeraryahanka Oo Barcelona U Kala Dooranayso Beddelka Luis Suarez
Kooxda kubada cagta Barcelona ayaa suuqa ugu jirta raadinta laba ciyaartoy oo xagaaga ay kusoo kordhinayaan safkooda, kuwaas oo ay u doonayaan boosaska difaaca bidix iyo weerarka oo lambarka 9 ah.
Eric Abidal, Ramon Planes iyo Pep Segura ayaa si adag ugu hawlan suuqa iyo sidii ay u fiiran lahaayeen laacibiinta suurtogalka ah ee ay qancin karayaan kooxahooda, kuwaas oo ugu iman karaya qiimo jaban.
Masuuliyiintan ayaa la sheegay inay kala dooranayaan liis ay ku qoran yihiin shan weeraryahan oo kala ah Luka Jovic oo u ciyaara Frankfurt, Mazi Gomez oo Celta Vigo ka tirsan, Krysztof Piatik oo AC Milan ay dhawaan kasoo iibsatay Genoa, Timo Werner oo RB Leipzing afka hore uga ciyaara iyo Nicolas Pepe oo ka tirsan naadiga reer France ee Lille.
Sida uu qoray wargeyska Marca ee kasoo baxa waddanka Spain, Barcelona ayaa bartil-maameedka koowaad ka dhiganaysa Jovic oo ugu dambayn ay ku qanceen qaabkii uu u burburiyey Inter Milan Khamiistii ee uu uga reebay tartanka Europa League.
21 jirkan ayay Abidal iyo labadiisa garab ka shaqaynayaan qaabkii ay ugu qancin lahaayeen inuu usoo wareego Camp Nou, isla markaana naadigiisa Frankfurt ay ugala xaajoon lahaayeen qiimaha suurtogalka ah ee ay kaga iibinayso.
Barcelona ayaa la sheegay in habeenkii Khamiistii ay la xidhiidhay wakiilka Jovic si ay ugala hadasho xiisaha ay u haysto laacibkan, hase yeeshee labada dhinac midna kama soo bixin wax war ah.
Frankfurt ayaa amaah kaga soo qaadatay Jovic kooxda reer Portugal ee Benfica, waxaanay haysataa doorasho ah inay si rasmi ah ugu iibsan karto 12 milyan oo Euro, balse haddaba waxa u muuqanaysa arrin qasab kaga dhigaysa inay degdeg u hirgeliso heshiiska rasmiga ah.
Jovic ayaa wararku sheegayaan in marka Frankfurt ay heshiiskiisa rasmi ka dhigto inay ku iibin doonto lacag u dhaxaysa 40 milyan illaa 50 milyan oo Euro.
Barcelona ayaa raadinaysa beddelka Luis Suarez oo bishii January ay da’diisu noqotay 33 jir, illaa haddana ma jiro weeraryahan rasmi ah oo booskiisa buuxin kara, waana sababta Barcelona ku qasbaysa inay degdeg u hesho beddelkiisa.